musha Europe Vatambi veBasketball Luka Doncic Diki Yemwana Nhau uye Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara yeNBA Superstar nezita rezita “El Niño Maravilla". Yedu yaLuka Doncic Yechecheche Nyaya uye Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Ehe, munhu wese anoziva nezve ake anopenya-kubata-bhora uye patent-yekumashure-kumashure matatu. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Ruka Doncic's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Luka Doncic Nyaya Yeucheche Nyaya:
Basketball shasha Luka Dončić akazvarwa musi wa 28 Gumiguru 1999 kuguta reLjubljana muSlovenia. Akazvarwa mumubatanidzwa pakati pababa vake Saša Dončić (aimbova basketball player akatendeuka murairidzi) naamai Mirjam Poterbin (muridzi weyekunaka salons).
Nyika yeSlovenia yerudzi chena ine mhuri yeSerbia yakamutswa mumhuri yepakati-yemhuri yakamisikidzwa kuLjubljana - iro rakakura uye guta guru reSlovenia - kwaakakurira asina hama dzekubereka.
Kukura muLjubljana, mucheche Dončić aive nemwedzi 7 chete paakatanga akabata basketball kuenda kunofadza kwababa vake. Pakazosvika nguva Dončić paakange ave zera rekutanga, akatanga kutamba nechuru chekupinda mukamuri rake ndokuenderera mberi nekuongorora mimwe mitambo kusanganisira nhabvu.
Luka Doncic Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Kunyangwe Dončić ainakidzwa nhabvu yemitambo yevacheche, zvinonakidza zvaakawana kubva mumitambo yake yebhasikiti yaive yechipiri kune imwe. Nekuda kweizvozvo, akaziva kubva pazera diki kuti akaitirwa mutambo uyu uye akazvikoshesa nekutamba basketball yakarongeka pachikoro chepuraimari.
“Kuchikoro chepuraimari, ndaigara ndichirovedza uye ndaitamba nevana vaive vakura zvakanyanya uye vane ruzivo kupfuura ini. Mazhinji acho aive akakura uye achikurumidza saka ndaifanirwa kuronga nzira dzekuvarova nadzo nehunyanzvi hwekugona. ”
Akayeuka Dončić webasa rake rekuvaka.
Panguva iyo Dončić zvaaive, aive nemazita anoverengeka ane mukurumbira mumutambo saVassilis Spanoulis & LeBron James seanenge achiri mudiki zvidhori pamwe nekubatanidzwa muchikamu chehunyanzvi hwavo mukugadzira basa rake.
Luka Doncic Wekutanga Basa Rehupenyu:
Dončić paakange ave nemakore masere, akakokwa kuti atange basa rake rehudiki kukirabhu Union Olimpija muLjubljana. Kukoka kwacho hakuna kushamisa kune basketball prodigy nekuti yakauya mazuva mashoma baba vake vatanga kuridza makirabhu epamba. Yakanga iri mukirabhu Union Olimpija kuti Dončić ane makore masere okukura akasimudzirwa kuboka rine makore gumi nematanhatu mushure mekuedzwa kwemaminetsi gumi nematanhatu nekuti airatidza kirasi yainzi yakanyanya kwazvo kune vechidiki vane makore masere.
Saka zvakatanga kukura kwejaya kwakakurumidza kuburikidza nemumazamu sezvaakaitwa kuti adzidzise timu yaOlimpija iri pasi-14 mumwaka unotevera. Panguva yepamusoro yebasa raDončić rekutanga kuOlimpija, akabatana neSpanish kirabhu Real Madrid nechikwereti mu2012 uye akatungamira timu kupedzisa wechipiri mumakwikwi eMinicopa Endesa pasi pemakore gumi nemana echiSpanish. Chii chimwe? akakunda mukwikwidzi MVP kukudzwa kuve tarisiro iyo siginecha yake yaishuvira zvikuru neReal Madrid.
Luka Doncic Mugwagwa Wokurumbira Nhau:
Real Real payakazosaina Dončić munaGunyana 2012, aingova nemakore gumi nematanhatu aine ruzivo shoma rweSpanish. Zvisinei, aive akagadzirira kuyedza matambudziko aive mberi kusanganisira nekufamba rwendo kubva kuSlovenia kuenda kuSpain ari ega. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti Dončić akafamba zvakanyanya pamakore ake ekutanga kuReal Madrid uye akarekodha meteoric inokwira kuburikidza nemazita ekuti iye aive ari kutonga ari kuwedzera nyeredzi munyika yeEuropean basketball nemazhinji MVP mibairo.
Pakupera kwemwaka we2017-18, Dončić aive awana mukurumbira wekuve pane akanakisa matarisiro epasirese pamwe nemutungamiri wekutanga kutanga mu2018 NBA Draft. Nekudaro, akatanga kudonha pasi mabhodhi ekunyora panguva yekunyora chirongwa. Muchokwadi, Dončić akadonhera pasi kune chinzvimbo chekuti zvikwata zveNBA zvisava nechokwadi pamusoro pezvemitambo sezvo mabhodhi asina kutaura zvakanaka nezvake.
Luka Doncic Rise Kuenda Mukurumbira Nyaya:
Pahusiku husiku, Dončić akasarudzwa neyechitatu yekupedzisira sarudzo neAtlanta Hawks mune 2018 NBA dhizaini. Nekudaro, iye akatengeswa kune iyo Dallas Mavericks muchirongwa chekodzero yekutsinhana kodzero. Kunyangwe Dončić akasaina kontrakiti yake ye rookie neMaverick musi wa 9 Chikunguru 2018, iye aisashandiswa ku2018 NBA Yenhabvu Yezhizha pamusoro pekunonoka kutenga kubva kuReal Madrid. Vateveri veNBA vachishevedzera kuti vaone Dončić achitamba pakupedzisira moyo yavo yakazadzikiswa paakagadzira mwaka wake wenguva dzose musi wa 17 Gumiguru 2018.
Hazvina kutora nguva refu Dončić asati afadza vaoni pamwe nevapikisi zvakafanana neunyanzvi hwake hunoshamisa hwakamuona achikunda Rookie yeGore yemwaka wa2018-19. Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora Dončić achiri mwana mutsva mubato reNBA, zvakadaro, arikutonga premiere yevanhurume nyanzvi yebhasikiti yeligi nechido uye chokwadi senge Stephen Curry pamazuva ake ekutanga mumutambo. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Luka Doncic Hukama Hupenyu Chokwadi:
Kure naLuka Dončić anoyevedza basa, iye ane anoshamisa rudo hupenyu hwave hunofarira zvikuru kune online tabloids. Chero nguva iyo mabloid paanopera zvinonakidza zvemitambo yake yedare, vanodzokera pahukama hwake hunowedzera nemusikana wake wenguva refu - Anamaria Goltes. Goltes naDončić vagara vachizivana kubvira vachiri vadiki asi zvishoma zvinozivikanwa nezvekuti pavakatanga kudanana.
Kunyangwe Shiri dzerudo dzakaenda dzakaparadzana munzira kutanga kwa2018, vakadzokera pamwe muna Chikunguru 2018 uye vanga vachiratidza vavariro dzevaviri kubvira ipapo. Hazvina kutora nguva refu musikana wepamusoro Goltes naDončić vasati varoorana sezvavanotaridzika kunge vakakwana kutakura vana (s) nemwanasikana (s).
Luka Doncic Hupenyu Hwemhuri Hupenyu:
Kuve nemusikana anodikamwa uye Mhuri kwakakosha kuna Ruka Dončić. Zvinoreva zvese kune nyanzvi basketball mutambi. Muchikamu chino, tinokuunzira chokwadi pamusoro pemhuri dzemhuri dzeDončić kutanga nevabereki vake.
About Luke Dončić baba:
Saša Dončić ndibaba vebhasikiti vane rudo uye vanotsigira baba. Akanga ari mutambi webhasikiti wechikamu chiri nani chehupenyu hwepakutanga hwaDončić uye anga achirairidza kubva 2010 kusvika panguva yekunyora iyi bio. Saša - uyo anobva kumhuri yeSerbia midzi - akaparadzaniswa nemukadzi wake (amai vaDončić) mu2008. Kunyange zvakadaro, akaramba ari padyo nemwanakomana wake uye achigara achimuyeuchidza kuti "kuva mwanakomana akanaka zvinoreva kuva Luka Doncic".
About Luke Dončić amai:
Mirjam Poterbin ndiamai vaDončić vane rudo. Aimbove hurdler, mutambi uye modhi uyo Anoshanda Yekunaka Shopu panguva yekunyora iyi biography. Amai vanotsigira - avo vaive naDončićs padanho rega raakatora akananga kuNBA - anobvuma kuti kumubvumidza kuenda kuReal Madrid pazera diki regumi nematatu yaive imwe yesarudzo yakaoma yaaifanira kuita. Yakanga isiri iyo kusvikira apera makore ekuyaruka kuti akatamira kuMadrid ndokutanga kugara naDončić munharaunda ine gated.
About Luke Dončić siblings:
Dončić anogona kuve iye oga mwana akaberekerwa vabereki vake nekuti ivo vakaparadzaniswa apo akange ave nemakore masere apo zvisiripo zvinyorwa zvevakoma nevanun'una naye mukukunda panguva yemitambo. Kunyanya zvakadaro, Doncic aingogara naamai vake kuMadrid uye haatauri nezve kushandisa nguva yakanaka nehama kana hanzvadzi panguva yezororo.
About Luka Dončić hama:
Kuenderera mberi kuhupenyu hwemhuri hwakawedzerwa hwaDončić, hazvisi zvakawanda zvinozivikanwa nezvezvizvarwa zvake kunyanya sekuru nababa vake pamwe nasekuru nasekuru naambuya. Saizvozvowo, hapana zvinyorwa zveababamunini vaDončić, babamunini uye babamunini apo vazukuru vake nevanin'ina vake vachiri kuzozivikanwa panguva yekunyora iyi biography.
Luka Doncic Hupenyu Hwechokwadi Chokwadi:
Luka Dončić ane hunhu hwakafanana hune iwo anogadzira wePisces Zodiac chiratidzo maitiro. Akasarudzika, akafanana, achiremekedza, achitarisa-nhanho, achifadzwa kuva naye, asina kupokana uye dzimwe nguva quirky.
Kuwedzerwa kune inonakidza yeDončić mafungiro ake echisikigo kusaratidza zvakawanda nezvehupenyu hwake hwega uye hwepachivande. Mabasa ayo mutambi webhasikiti anoona seanofarira nezvaanofarira kuita zvinosanganisira kutamba mitambo yemavhidhiyo, kutamba kwebhokisi, kutarisa mafirimu, kutamba nhabvu uye kupedza nguva yakanaka neshamwari nehama.
Luka Doncic Maitiro ehupenyu:
Nezve maitiro aLuka Dončić uye anoshandisa mari, mutero wake wakawanda uchiri kuongororwa panguva yekunyora nekuda kwekuti ane ruzivo rwegore chete muNBA. Zvisinei, iye anofungidzirwa kuti ari kuunganidza mibairo yakakura muhomwe, muhoro uye mukushandiswa.
Mutambi webhasikiti haasati akura pakuvheneka hupfumi hwake huri kusimukira, nekudaro, hazvinyanyo kuzivikanwa nezvekukosha kweimba kana imba iyo yaanogara mairi kana mota dzaanofamba. Nekudaro, anozivikanwa kuve nemotokari yeAudi yaive nechipo kuReal Madrid basketball players nemugadziri wemotokari.
Luka Doncic Chokwadi:
Kuputira nyaya yedu yeLuka Dončić yehucheche uye biography pano pane zvishoma kana zvishoma zvishoma zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Nezve Dončić Nickname: Unoziva here kuti zita remadunhurirwa raDončić reSpanish "El Niño Maravilla" rinoshandurwa se "Wonder Boy" muChirungu? Akapihwa zita remadunhurirwa mumazuva ake ekutanga kuReal Madrid uko kwaakatonga masheya uye akahwina akawanda MVP mibairo.
Tattoos: Luka Dončić ane akati wandei maatatoo kana ehunyanzvi hwemuviri kushongedza kukwirira kwake kwe6 '7 ″. Iwo maTattoo anosanganisira chirevo chechiLatin "non-desistas, non-exieris" iyo inoshandura se "usazombokanda mapfumo pasi, usambozvipira" muChirungu, jeresi rake nhamba 7 kuReal Madrid pamwe nemufananidzo wengwe paruoko rwake rweruboshwe. Dončić akawanawo tattoo yeEuroBasket 2017 mukombe pachidya chake chekurudyi mushure mekubatsira Slovenia kuhwina mumakwikwi.
Kusvuta uye Kunwa: Dončić haana nhoroondo yekusvuta, uyezve haapiwi kunwa panguva yekunyora. Panzvimbo pezvo anovavarira kuva noutano hwakanaka uye kupfeka chero chinhu chinogona kudzikisira kuita kwake.
Zvipfuwo: Dončić ane chinhu kune zvipfuwo kunyanya imbwa. Ane imbwa inonzi Hugo panguva yekunyora. Hugo imbwa yakatsvinda yerudzi rwePomeranian. Iyo imbwa inogara mune imwe imba naDončić uye inopetwa seshamwari yemutambi we basketball.
Chitendero: Dončić haanamate uye achiri kuzopa ruzivo pamusoro pezvaaitenda pakunyora. Pamusoro pezvo, haana kutaura kana kufamba zvinomupa seusingatendi. Nekudaro chimiro chake chezvinhu zvekutenda chakarara pane imwe nzvimbo pakati pekuvanzika uye anotarisisa pakutarira pane basketball.
CHOKWADI CHECK: Thanks for reading vedu Luke Doncic Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At childhood biography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!